Maayarka Hargaysa Masuul Ku Astaysan Waxqabad iyo Horumar W/Q : C/laahi Cabdi Yuusuf (Nabad-doon) | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Gudoomiyaha golaha degaanka ahna maayarka caasimadda Somaliland C/raxmaan Maxamuud Caydiid (Soltelco), waa maayarkii ugu da’da yaraa ee soo mara xilka maayarnimadda Hargisa.
Runtiina waxyaabaha uu ka qabtay caasimadda aad ayay u badan yihiin oo lama soo koobi karro, cidii is tidhaahda qari waxyaabaha horumarka ah ee qabtayna waa nin Cadceedda (Qoraxda) Sacabada ku qarinaya.
Waxaanan ka soo qaadan karnaa waxyaabaha aadka u badan ee uu qabtay maayarka Hargays, haddii ay tahay jidadka Laamiyadda ah, wershadii samaynaysay, Sariibado lagu nastay, kumanaan qoys oo dib-u-dejin ku sameeyay, nadaafadii magaaladda.
Ciidanka Dab-demiska tayayntiisa, shaqalaha oo uu mushar kordhin u sameeyay golaha degaanka oo uu miisaaniyad u sameeyay, dawladaha hoose caalamka iyo dawlada hoose Hargisa oo uu mataaneeyay.
Xaqiiqdii waxaan ku tilmaami karaa maayar Soltelco, in uu yahay maayar ku astaysan wax qabad ALLE ha garab gallo. Sidoo kale maayarka caasimadda Hargaysa C/raxmaan Soltelco, waxa uu dib-u-dhis iyo dayactir balaadhan ku sameeyay jidadka caasimadda, iyadoo ay jiraan wadooyin cusub oo uu ka hirgeliyay xaafadaha iyo degmooyinka Hargaysa.
Jidadkan dhismahooda iyo dayactirkooda waxa ku baxay muruq iyo maalba, waana hanti guud oo ummaddu wada leedahay. Waxaanan dadweynaha ka codsanaynaa in ay ilaaliyaan oo aan waxyeelo loo gaysan jidadka.
Waxaana la inooga baahan yahay in ay maayarka caasimadda ku bar-bar istaagno dedaalka uu ugu jirro horumarka kala duwan ee uu ka waddo caasimadda, isla markaana lagu hambalyeeyo sida wanaagsan ee uu uga soo baxay waajibaadkiisa.
By: C/laahi Cabdi Yuusuf (Nabad-doon)
Madaxa faraca dhiraynta ee dawladda hoose caasimadda Hargaysa.